Otu esi enweta echiche blog site na iji Google
Mọnde, Febụwarị 14, 2011 Tuesday, October 4, 2011 Michael Reynolds kwuru
Dị ka ị nwere ike ịma, ịde blọgụ dị oke mma ahịa ahịa arụ ọrụ ma nwee ike iduga n ’ọkwa njin nchọta emelitere, ntụkwasị obi siri ike, yana ọnụnọ mgbasa ozi ka mma.
Agbanyeghị, otu n'ime akụkụ kachasị sie ike nke ịde blọgụ nwere ike ịnweta echiche. Echiche Blog nwere ike si n'ọtụtụ isi, gụnyere mmekọrịta ndị ahịa, ihe ndị dị ugbu a, na akụkọ ụlọ ọrụ. Agbanyeghị, ụzọ ọzọ dị mma iji nweta echiche blọọgụ bụ naanị iji nke ọhụrụ nke Google nsonaazụ ozugbo atụmatụ.
Tozọ iji nke a bụ ịmalite dee na isiokwu ndị metụtara ụlọ ọrụ gị, wee hụ ihe Google jupụtara na gị. Iji maa atụ, hapụ ka ị gbaa ọsọ nri nri ị na-achọkwa echiche. Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ọchụchọ inwere ike ịme:
Naanị site na ịpịnye ihe "na-eri nri" na igbe ọchụchọ, a na-egosi gị ụfọdụ ogologo ọdụ isiokwu nhọrọ nke nwere ike ịghọ isiokwu blog. Lee ihe atụ ọzọ:
Naanị site na ịmalite nyocha gị na "nri", ị ga-enweta ụfọdụ echiche ozugbo nke nwere ike ịghọ nnukwu aha. Ọmụmaatụ:
“Usoro nri usoro nri: ihe ha anaghị agwa gị na igwe onyonyo”
"Ntuziaka nri pyramid: mkparịta ụka nke ndị ọkachamara na-edozi ahụ n'ime obodo atọ"
Site na ịmalite aha blog gị na usoro ọchụchọ ndị a, ị na-akwado isiokwu blog gị na ahịrịokwu ndị mmadụ na-enyocha n'ezie, nke na-eme ka o nwekwuo ohere ịchọta gị site na ọchụchọ Google.
Ọ bụrụ na ịrapara na enweghị ike iwepụta isiokwu maka blọọgụ gị ọzọ, gafee Google wee tụfuo ya okwu metụtara ụlọ ọrụ gị. Nwere ike ịchọta ụfọdụ nnukwu echiche nke nwekwara ike imeziwanye SEO gị.
Tags: Analyticsnsonaazụ azụmahịaarụmọrụmultidomainihu peejiChọọ MarketingSliderWordPress
SEO adighi akwusi na saiti gi
Social Media na-emefu tobawanye 18% + na Afọ 5
Jason Rosoff kwuru
Feb 20, 2011 na 8:04 PM
M a mara mma ọhụrụ na ịde blọgụ idaha (http://jasonjhr.wordpress.com/) ma nwee ụfọdụ nsogbu ịbịa na post post echiche. Nke a bụ nnukwu aghụghọ iji nyere aka lekwasị anya n'echiche ụfọdụ, ma eleghị anya ịchọta ụfọdụ ndị ọhụrụ.
Ì chere na ime nke a ga - enyere aka SEO na ịhọrọ isiokwu dị mma?
Feb 22, 2011 n’elekere 2:07 nke abali
M ga-eche otú ahụ, ebe ọ bụ na ị na-akwado isiokwu blog gị na ọchụchọ ndị a ma ama na Google. SEO gụnyere ọtụtụ akụkụ na-akpụ akpụ, ọ bụ ezie 🙂
Otu Degree Marketing
Nnukwu ọgụgụ. Ọ dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ ka ha na-ewepụta ọdịnaya ọhụrụ ma na-ewepụta echiche ọdịnaya ọhụụ mgbe niile nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Ọ dị mkpa ịnọdụ ala na ịhazi oge, wepụta oge ma lekwasị anya na atụmatụ ọdịnaya gị. Site na Google ogo iji jikọta ụlọ, ọ bara uru oge na mbọ!
Jul 10, 2016 na 8: 39 AM
Ntụnye dị egwu, ọ masịrị m ịnwe echiche sitere na ahụmịhe ụbọchị ruo ụbọchị iji gosipụta ụdị akwụkwọ ọgụgụ kacha dịkarị nso.